Siyaasadda soo celinta| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Sooceliyaa Policy
markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 20/11/2020
Siyaasadeenu waxay socotaa 30 maalmood. Haddii 30 maalmood ay ka soo wareegtay markii aad iibsatay, nasiib darro, kuma siin karno lacag celin ama beddelid.
Adiga ayaa ka mas'uul ah bixinta kharashka dhoofinta soo noqoshada shay kasta. Kharashka dhoofintu waa mid aan la soo celin karin. Haddii alaabta la soo celiyey ay khaldan yihiin oo lagu soo celiyey waqtiyada la cayimay, waxaan soo celin doonaa kharashka boostada.
Ku -soo -celinta shay lacag -celin ah waa la oggol yahay, shaygaagu waa inuu noqdaa mid aan la isticmaalin isla xaaladdii aad heshay. Sidoo kale waa inay ku jirtaa baakada asalka ah.
Si aad u buuxiso soo celinta, waxaan u baahannahay risiit ama caddayn ah iibsashada.
Shay kasta oo aan ku jirin xaaladdiisii ​​hore ayaa waxyeelloobay ama qaybo ka maqan sababo aan sabab u ahayn qaladkayaga ama shay kasta oo la soo celiyey in ka badan 30 maalmood ka dib dhalmada uma qalmi doono lacag -celin.
Wax kasta oo galaas oo waxyeelloobay wuxuu u baahan yahay inuu noo soo wargeliyo saddex maalmood oo shaqo gudahood marka la keeno iyo kahor isticmaalka.
Lacagta (haddii ay khuseyso)
Markaad soo noqoto oo laguu kormeero, waxaan kuu soo diri doonaa email si aan kuugu ogeysiinno in aan helnay alaabtaada la soo celiyay. Waxa kale oo aanu kuu sheegi doonaa oggolaanshaha ama diidmada lacag celintaada.
Haddii soo -celintaada la oggolaado, deyntu waxay si otomaatig ah ugu socon doontaa kaarka amaahda ama habka lacag -bixinta asalka ah, maalmo cayiman gudahood.
celinta daaho ama la la'yahay (haddii ay khuseyso)
Haddii aadan weli helin lacag celin, marka hore hubi koontadaada bangiga.
Markaa, la xiriir shirkadda kaarka deynta, waxay qaadan kartaa waqti ka hor inta soo celintaada lagu arki doono koontadaada.
Marka xigta, la xiriir bangigaaga. Badanaa waxaa jira xoogaa waqti ka baaraandeg ah ka hor inta lacag celinta lagu muujiyo bayaankaaga.
Haddii aad sidaan oo dhan sameysay oo aadan weli helin lacagta lagaa rabo, fadlan nagala soo xiriir order@dragonsheadshop.co.uk
Waxyaabaha iibka ah (haddii ay khuseyso)
Alaabta kaliya ee lagu iibsaday qiimaha caadiga ah ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan lacag celin. Alaab kasta oo lagu iibsaday qiimo iib oo la dhimay, dib looma soo celin doono.
Is-weydaarsiga (haddii ay khuseyso)
Waxaan beddelnaa alaabta kaliya haddii ay yihiin kuwo cilladaysan ama waxyeelloobay. Haddii aad u baahan tahay inaad ku beddesho sida oo kale, email noogu soo dir order@dragonsheadshop.co.uk oo ay la socdaan sawirrada burburka ka dibna u dir shaygaaga Dragons Head Shop LTD, 14 Broadview Road, London, SW16 5AU, Boqortooyada Ingiriiska.
Si aad u soo celiso badeecadaada, waa inaad u soo dirtaa alaabtaada Dragons Head Shop LTD, 14 Broadview Road, London, SW16 5AU, Boqortooyada Ingiriiska waana inaad tixgelisaa adeegsiga adeegga maraakiibta la socon karo ama iibsashada caymiska maraakiibta. Ma dammaanad qaadno inaan heli doonno shaygaagii soo noqday mana soo celin doonno ama beddeli doonin tan la'aanteed.